महिला नेतालाई पाखा लगाइदै छः अमृता नेपाल |
प्रकाशित मिति :2017-10-22 15:30:25
विद्यार्थी छदै राजनीतिक जीवनको सुरुवात गरेकी अमृता नेपाल २०५५ मा तत्कालिन नेकपा माओवादीको जनयुद्धमा सामेल भईन् । भूमिगत भई पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी पुरा गरेकी उनी अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै हाल केन्द्रिय सचिवालय सदस्य छिन् । पार्टीको जिल्ला सचिवको भूमिका समेत निर्वाह गरेकी उनी संविधान सभामा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक सभासद पनि भइन् । अब हुन लागेको प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा फेरी समानुपातिक कै चर्चामा रहेकी नेपालसँग महिला खबरका लागि बिदुर आचार्यले निर्वाचनमा महिला नेतृत्वको सवाल र सहभागिता बारे गर्नुभएको कुराकानीः
प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी कस्तो छ ?
निर्वाचनकोलागि पार्टीका सबै जनवर्गीय संगठन तयारी अवस्थामा छन् । उमेद्वारी दर्तासँगै अझ बढी चुनावी माहोल बढ्नेछ । यो अवधिमा संगठन सुदृढीकरण, आवश्यक प्राविधिक तयारी, पार्टी नीति जनतासम्म पु¥याउने काम भईरहेको छ ।
महिला उम्मेदवारको चर्चा र प्रचार कस्तो छ ?
महिला उम्मेदवारको कुरा गर्दा दुख लाग्छ । खासै चर्चा छैन । हामी महिला आन्दोलनमा लागेर पनि महिलाको सशक्तिकरण गर्न सकेका छैनौं । लामो समयदेखि महिलाहरू राजनीतिमा छौँ तर, महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन । स्थानीय निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिला अनिवार्य थियो तसर्थ बाध्यात्मक रुपमा महिला निर्वाचित गरियो । तर अब प्रदेश र केन्द्रमा त्यो अवस्था रहनेमा व्यापक शंका छ । देशभरको अवस्था हेर्ने हो भने पनि महिला उम्मेदवार कम र चर्चा अझै कम छ । त्यो अवस्था सिन्धुपाल्चोकमा पनि उस्तै छ । महिला उम्मेदवारको आवश्यकता अन्तरआत्माबाट जरुरी नठान्दासम्म अवस्था फेरिने छैन ।
समावेशी सिद्धान्तलाई बढी अवलम्वन गर्ने भनिएको तपाईको पार्टीले जिल्लामा किन महिला उम्मेदवार नबनाएको ?
सैद्धान्तिक नारालाई व्यवहारमा लैजान राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । माओवादी यसमा प्रतिवद्ध छ भन्ने मेरो विश्वास कायम छ । सोचाई र व्यवहार परिवर्तन गर्न निकै गाह्रो छ । पितृसतात्मक सोच राजनीतिमा पनि छ । हामी त्यसकै बिरुद्धमा लडिरहेका छौँ । महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन कै लागि हामी निरन्तर आवाज उठाईरहेका छौँ । भूगोलको हिसाबले हामी राजधानीसँग जोठिएका छौ तर, हाम्रो जिल्लाको महिलाको अवस्था भने निकै दर्दनाक छ । महिलाको अवस्था सुधार गर्दै महिला मुद्दालाई मूल धारमा ल्याउन कुनै एक होईन सबै राजनीतिक दल लाग्नुपर्छ । संगठित रुपमा महिला अधिकारकर्मी लाग्नुपर्छ ।
राज्यका हरेक निकायसँगै प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभामा महिलाका लागि छुट्याइएका कोटामा महिलालाई शसक्त रुपमा निर्वाचित गर्न के गर्नुपर्ला ?
प्रतिनिधी सभा र प्रदेशसभामा महिलाको उपस्थिती ३३ प्रतिशत हो । तर, त्यसको सुनिश्चितता छैन । पार्टीहरूले महिला उम्मेदवारको संङ्ख्या पु¥याउन निकै असहज मानिरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस अघि अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले संविधानमा उल्लेख भए अनुरुप महिलाको स्थान सुरक्षित गर्न आफ्ना पार्टीलाई अनुरोध गर्यो । सञ्जालले कुनै क्षेत्रमा महिला महिला बीच नै प्रतिस्पर्धा गराउनपनि अनुरोध ग¥यो । तर त्यो पनि सम्भावना टरेको बुझिन्छ । यदि त्यसो भएको भए महिला उम्मेदवार विजय हुने निश्चित हुन्थ्यो । पुरुष र महिला बीच पतिस्पर्धा हुँदा पुरुष विजयी हुने संभावना पुरुष प्रधान देश भएकै कारणले हुन्छ । महिला पुरुषको तुलनामा अहिले पनि केही कमजोर छन्, त्यो व्यवहारिक कारणले हो । त्यसो हुँदा असमान क्षमता र समान प्रतिस्पर्धा हुन्छ र महिलाको उपस्थिति घट्छ । राजनीतिक दलले प्रतिनिधीसभामा १ र प्रदेशसभामा १ महिला अनिवार्य बनाईनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो ।
महिला नेतृत्वमा पुगेपछी समाजको आर्थिक, सामाजिक र न्यायीक अवस्थामा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
समाजको आधा बढी हिस्सामा रहेको महिलाले हरेक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान पाउन सकेका छैनन् । समाजको आवश्यकताले अब गुणात्मक फड्को मार्न भनिरहेको छ । आार्थिक परनिर्भरताले पनि महिलाको अवस्था थप जटील बनेको छ । यो अवस्थामा महिलालाई अत्मनिर्भर बनाउने, समाजका कुरीति हटाउने, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सबै वर्ग र समुदायलाई सुन्दर बनाई समाज निर्माणमा सहभागी बनाई महत्वपूर्ण प्रभाव दिन सकिन्छ ।
जिल्लामा राजनीतिक दलले महिला नेतृत्वलाई पछाडी पारेका छन् अब अगाडी बढाउन के गर्नुपर्ला ?
राजनीतिकर्मीमा महिला आधा शक्ति हो भन्ने पर्नुप¥यो । महिलाको नेतृत्व भूमिका बिना समृद्ध जिल्ला निर्माण सम्भव हुदैन भन्ने प्रष्ट हुनुप¥यो । महिलाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने चिन्तन हट्नुप¥यो । अवसर बाँड्ने कुरामा हिच्किचाउनु भएन । आवश्यकताले नै क्षमता विकास हुने हो । सबै पार्टीले क्रमभङ्ग गर्दै महिला उम्मेदवार बनाउने महिला लक्षित कार्यक्रम, नीति बनाउने र मुल्याङ्कन गर्ने क्रम जारी राख्नुुपर्छ । महिला शक्ति पछाडी पर्नु आधा समाज पछाडी पारिनु हो, यसतर्फ पार्टी नेतृत्व सदैव सजग रहनुपर्छ ।
तपाईं निर्वाचित भएपछी हिंसापीडित र पछाडी परेका महिलाको लागि के गर्नुहुन्छ ?
समाजमा व्याप्त समस्याका आधारमा अर्थात हिंसा र उत्पीडनमा परेका महिलाहरूको पक्षमा नीति बनाई कार्यान्वयन तहमा लैजानु पहिलो काम हो । दोस्रो भनेको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा महिलाको अवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक नीति कार्यक्रम बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु हो ।
संघ र प्रदेशमा महिलाहरूलाई के कस्ता अवसरहरू छन् ?
प्रतिनिधित्वका हिसाबले ३३ प्रतिशत महिला हुनेछन् । संविधानले महिलाका अधिकर सुरक्षित गरेको छ । त्यो अधिकार प्रत्याभूत गराउन सक्दा पनि महिलाहरूले अवसर पाएको मान्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तह, संघ र प्रदेशसभा निर्वाचनले जनतामा मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्दै अगाडी बढ्नेछ ।
जिल्लाका महिला नेताहरूमा नेतृत्व गर्ने क्षमता कस्तो पाउनु हुन्छ ?
क्षमता छ तर अवसर छैन । महिलालाई मतदाताकै रुपमा हेरिन्छ । आफ्नो प्रतिनिधीको रुपमा लिएको पाईदैन । महिला भएकै कारण वर्षौ त्याग गरेका, राजनीतिमा खारिएका महिलाहरू पनि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सर्वमान्य नभएको भन्ने भान हुन्छ नै । त्यसो हुनुमा अन्य कारण नभई महिला भएकै कारण भएको हो । अधिकार र एजेण्डामा एक हुन नसक्दा महिलालाई कमजोर परिभाषित गरिएको छ । र त्यसको फाईदा पुरुष नेताहरूले लिइरहनुभएको छ । तसर्थ आफ्नो समुदायको शक्तिलाई पहिचान गरी संगठित गर्दै आवाज उठाउनु जरुरी छ । अवसर पाँउदा महिला नेताहरूले बढी नै जिम्मेवार ढंगले नेतृत्व प्रदान गरेका छन् ।
निर्णायक स्थानमा पुगेपछी तपाईको भुमिका कस्तो हुनेछ ?
सवै वर्ग र समुदायलाई एक ढिक्का बनाई समृद्धिका लागि सशक्त रुपमा लाग्नेछु ।
पार्टीले गठवन्धन गरेर अगाडी बढ्दा महिला नेतालाई उम्मेदवार बन्न कति बञ्चित बनायो ?
गठवन्धन हुनु वस्तुगत आवश्यकता हो र स्वागतयोग्य छ । महिला उम्मेदवार एकल हुँदा नि कम गठवन्धन हुँदा नि कम हुने सम्भावना छ । संवैधानिक समस्या नआउला भन्न सकिन्न । समानुपातिकबाट महिला बढी पठाउने प्रयत्न भएको देखिन्छ तर त्यसले ३३ प्रतिशत पुग्दैन । जति लचिलो भएर गठवन्धन वनेको छ त्यति नै लचिलो भएर महिला उम्मेदवार बनाइनुपर्दथ्यो । तर त्यो हुन सकेन । पहिलो चरणमा हुन लागेको निर्वाचनकका लागि उम्मेदवारको टुंगो लगाउने क्रममा महिलालाई पाखा लगाएर पुरुषका नाममा सहमति भएका छन् । पार्टीमा पुरुष जत्तिकै महिलाहरूको पनि योगदान छ तर अवसरको कुरा महिलाको क्षमतामा प्रश्न उठाएर बञ्चित गर्ने कामको अन्त्य हुन सकेन । त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एकाध महिलाहरूले मात्रै टिकट पाए र पाउने भएका छन् ।